i-induction Hardening Steel Cam Assembly-HLQ uhlelo lokuqinisa lokuqinisa
Ikhaya / Izicelo / Ukukhishwa Kwesivinini / lokungeniswa Hardening Steel Cam Assembly
Isigaba: Ukukhishwa Kwesivinini Tags: thenga umshini wokuqinisa we-induction, lukhuni, izinhlanga ezithwala kanzima, ukuqina kwe-fasteners lokungeniswa, izikhonkwane zokuqina zokungeniswa, lukhuni insimbi cam, EKUKHONZENI, KUMSEBENZI wokwenza lukhuni, Ebusweni ukuqina, ukuqina kokungeniswa, lokungeniswa lukhuni camshafts, lokungeniswa lukhuni crankshafts, intengo yomshini wokuqinisa, lokungeniswa Hardening Steel Cam
Inhloso: Ukuqeda ukuqina umjikelezo wemihlangano engu- thick ”ensimbi eqinile
Okubalulekile: ¼ ”insimbi yensimbi yekhamera yesifunda yamajiyometri ahlukahlukene
Izinga lokushisa: 1650 ºF (900 ° C)
Imvamisa: 177 kHz
I-DW-UHF-10kW ukufakwa kokushisa uhlelo, ifakwe isiteshi sokushisa esikude esiqukethe i-1.0µF capacitor eyodwa kanye nekhoyili yokushisa yokungeniswa eyenzelwe futhi yathuthukiswa ngqo yalolu hlelo lokusebenza
Kusetshenziswa ikhoyili ye-helical ejika kabili ukushisa ama-cams. Isikhathi sokushisa siyahlukahluka kusuka kumasekhondi ayi-120-150. Ngemuva kokushisa, izingxenye ziyaqedwa emanzini.
Ukukhishwa Kwesivinini indawo yangaphandle ye-cam ene-induction iholela ku:
• ukufudumeza okufanayo ngemiphumela efanayo
• ikhoyili eyodwa ingasetshenziselwa ama-geometri amaningi
• imiphumela engaguquguquki kusuka kucezu kuya kwesinye
Kukhona izinkulungwane eziphumelele kakhulu imishini yokuqinisa induction ezikhiqiza izigidi zezingxenye ezinikezwe izingxenye ezahlukahlukene zemboni. Phakathi kwezinto ezihlala zenziwa lukhuni lokungeniswa (i-IH) kukhona izingxenye ezinjenge-camshafts, ama-crankshafts, amagiya, ama-sprockets, imishiza yokudlulisela, izikopelo zebhola, izikhonkwane, amarokhethi amazinyo, izintambo zamasondo, imijaho ethwele, iziqobosho, amathuluzi okusebenza, umkhondo wezicathulo zomhlaba- imishini ehambayo - uhlu alupheli. Njengesibonelo, Umdwebo ukhombisa uhlu oluncane lwamajometri aqiniswa njalo.